Wireless Gaming Mouse: Roccat Inosuma Burst Pro Mhepo - Game Point - Bhodhi & Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 2, 2022 | Misoro Yakaisvonaka, nhau, Vhidhiyo mitambo
Roccat yazivisa mbeva nyowani yekutamba: iyo Burst Pro Mhepo. Chekutanga kushandiswa muBurst Pro, iyo optical switch inobata kaviri nekukurumidza seyemuchina switch uye inotora kaviri kureba, sekureva kwemugadziri. Iyo Burst Pro Mhepo ndiyo isina waya vhezheni yeBurst series.
Roccat's Burst Pro Mhepo inowana kureruka kwayo kuburikidza nebionic goko rakavakirwa pakuvakwa kwehuchi, iyo inoratidzirwa nenzvimbo ina dzeRGB uye nepamusoro inopenya. Iyo Burst Pro Air yakabatana nePC kungave kuburikidza ne2,4 Ghz kana Bluetooth. Hupenyu hwebhatiri maawa zana, maminetsi gumi ekuchaja anokwana maawa mashanu ekutamba. Zvakare zvinosanganisirwa iwo anopisa-akagadziriswa mbeva tsoka dzakagadzirwa neiyo yakachena PTFE kune akakwana eku gliding zvivakwa kunze kwebhokisi.
Roccat: Burst Pro Mhepo inowanikwa mune maviri mavara
Iyo isina waya Burst Pro Mhepo haina huremu pa81g uye inoratidzira Roccat's yakakosha zvinhu senge
iyo Owl-Eye Optical 19K DPI Sensor uye zvinoshamisa zvinoshamisa Titan Optical Swichi, nepo Stellar Wireless Technology inokwidziridza uye inogadzirisa isina waya yechiratidzo simba uye kushandiswa kwebhatiri kuita kwakaringana.
"Burst Pro yedu ine waya yakagamuchirwa zvakanyanya nevatambi veFPS munharaunda medu vanosarudza ergonomic uye symmetrical mouse. Iye zvino neBurst Pro Air, isu tinofara kupa mabhenefiti akafanana kune vatambi vanofarira mbeva isina waya," akadaro René Korte, muvambi weRoccat uye maneja mukuru wePC peripherals kuTurtle Beach. "Burst Pro Air inoshandisa matekinoroji edu azvino uye kunyangwe mbeva isina waya, inoramba ichitenda
yedu yakasarudzika Bionic Shell dhizaini, yakareruka uye yakasununguka. Iyo Burst Pro Air inokwenya mabhokisi ese emazuva ano anokwikwidza PC gamer. "
Iyo Burst Pro Air inoratidzira yakafanana ergonomic uye symmetrical chimiro chakagadzirwa neRoccat kune yekutanga waya Burst Pro; dhizaini yakatarisana nekuita uye kunyaradza mumitambo inokurumidza-yemunhu wekutanga seFortnite, Apex Legends, uye Valorant. Roccat's Optical owl-eye sensor (yakavakirwa paPixArt's PAW3370) inoburitsa 19K DPI uye 400 IPS yekutevera yekumhanyisa kwekuita kusati kwamboitika mukuona mafambiro embeva. Pamusoro pezvo, Roccat's mheni-inokurumidza Titan Optical Swichi inopa inopindura tinya ine zvinoshamisa inokurumidza actuation yekumhanya kusingaenzaniswi uye nemazvo. Iyo Titan Optical Switch inomhanya zvakapetwa kaviri semuchina chinja uye yakapetwa kaviri sekugara, ine actuation yekumhanya ye0,2 ms yekusvika mamirioni makumi manomwe ekudzvanya.
Nepo mbeva dzakawanda dzisina waya dzichida kurema, iyo Burst Pro Air haina huremu pa81g chete nekuda kweRoccat yakasarudzika mvura uye huruva inodzivirira Bionic Shell dhizaini. Iyo Burst Pro Mhepo ine zvakare ina ma LED nzvimbo dzinoita kuti mukati memuzinga wehuchi uoneke nechiedza chawo. Kana yangobatanidzwa, vatambi vanogona kushandisa Roccat's AIMO RGB yekuvhenekesa injini - iyo inogadzira mwenje wakajeka mumamiriyoni gumi nematanhatu emavara - kuyananisa iyo Burst Pro Air nezvimwe zvinowirirana AIMO-inogonesa zvigadzirwa kugonesa iyo RGB mhedzisiro yeRoccat -Chishandiso kuyerera chinotevera.
Roccat: isina Cord uye inosvika zana maawa ebhatiri simba
Iyo Burst Pro Air's isina waya yekubatanidza uye kuita kwebhatiri inotungamirwa neRoccat's Stellar Wireless tekinoroji, inogara ichienzanisa simba rechiratidzo uye kushandiswa kwebhatiri kuita kwakaringana. MaGamers zvakare ane sarudzo yeakadzika-latency 2,4GHz isina waya yekubatanidza kana inogoneka Bluetooth 5.2 yekubatanidza. Iyo Burst Pro Mhepo inopa anosvika zana maawa emagetsi asina waya pamutengo mumwe chete wekutamba usingakanganisike.
Uyezve, USB-C yekuchaja nekukurumidza inobvumira kusvika maawa mashanu ekutamba nekuchaja kwemaminetsi gumi chete. Kana yave nguva yekuchaja iyo Burst Pro Mhepo, iyo inoshanduka uye isingaremi Phantom Flex Cable inonzwa isina waya sezvazvinogona. Iyo Burst Pro Air yekupisa-yakagadziriswa yakachena PTFE mbeva tsoka zvakare inoita mutsauko chaiwo. Iyo yakawedzera kupisa kurapwa inoreva iyo Burst Pro Mhepo inoburitsa zvinoshamisa kutsvedza uye yakatsetseka mbeva kufamba kunze kwebhokisi, pasina nguva yekupwanya.
Pamusoro pehupamhi hwemabasa, iyo Burst Pro Air inotsigirawo Nvidia Reflex Analyzer. Nvidia G-Sync inoratidzira neReflex inoratidzira yekutanga uye yega system latency analyzer inoona kudzvanya kubva kumakonzo emitambo uye inoyera nguva yainotora kuti mapixels anobuda (pfuti inopenya) ichinje pachiratidziri. Kana yakashandiswa pamwe chete neNvidia G-Sync kuratidzwa neReflex, iyo Roccat Burst Pro Air inobvumira vatambi kuyera nekuvandudza peripheral uye kupera-kusvika-kumagumo system latency.
Iyo Burst Pro Mhepo - Yakareruka Optical Wireless RGB Gaming Mouse ikozvino inogona kufanoodha kubva kwatiri uye vese vatengesi vari kutora chikamu EUR 99,99 mune nhema nechena. Ichatangwa muna Kubvumbi 26.
Roccat Burst Pro Mhepo - yakareruka, symmetrical, isina waya, yekuona... * 99,99 EUR tenga
André Volkmann mutori wenhau anoshanda nenhau dzemuno, mitambo nevaraidzo.
Yakapedzisira kugadziridzwa pa18.05.2022/XNUMX/XNUMX / Affiliate Links / Mifananidzo kubva kuAmazon Product Advertising API. * = Affiliate links. Mifananidzo kubva kuAmazon PA API
Kare German Computer Game Award 2022: Iyo "yakanakisa" mitambo yegore
Inotevera Dzidza masvomhu: Dzidzira hunyanzvi hwekutanga nemitambo yebhodhi
Ishe weRings LCG: Kune madhizaini ekutanga evanotanga
Everdell anohwina "Graf Ludo": Yakanyanya Yakanaka Mhuri Game Game Graphics
Hapana ongororo yeCyberpunk 2077: Tiri kumisikidza kuongororwa kweinofungidzirwa inyanzvi
Star Wars: Legion inowedzerwa kuti ibatanidze Darth Maul uye Commander Skywalker